I-PiccadillyGreenVillas-Grandeur ukuya kuthi ga kwi-100mbps yomnatha
Dauis, Panglao Circumferential Road, Bohol, Philippines
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguApolonia
Ikhaya elisembindini wesiqithi sasePanglao, elinomoya opholileyo ngokupheleleyo ngezi fanitshala zilandelayo kunye nezixhobo zombane:
-Ibhedi yokumkanikazi kunye nebhedi yokutsalwa ngengubo
-PLDT isantya esiphezulu seFIBER OPTIC net
- ikofu, ikhilimu, iswekile
-izinto zangasese (i-shampoo, isepha, intlama yamazinyo
Sifake i-GOOGLE WIFI MESH ukonyusa isantya somnatha ongasikelwanga mda.
Apha kwiPiccadilly Green Villas, UKHUSELEKO yeyona nto iphambili kuthi.
IPICCADILLY GREEN VILLAS APARTMENT INDOT ACREDITED.
Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kukhenketho lwakho lwemihla ngemihla kwaye ukonwabele ukukhanya kwe-cove ethandekayo apho unokutshintsha imibala ngokokhetho lwakho. Ifanelekile kwikhaya elikude nekhaya. Iindwendwe nazo ziyakonwabela ibhedi yethu yobukhulu bokumkanikazi kwiindwendwe zokuqala ezi-2 kunye nebhedi yokutsala kunye nenye ibhedi eyodwa iya kuqengqeleka kuzo naziphi na iindwendwe ezongezelelweyo. Indawo yokuhlala ibonelelwa ngamanzi okusela. Le ndawo kukuhamba nje kwe-10-15minute ukuya kumqolomba odumileyo waseHinagdanan kwaye kufutshane neMithi Resort & Spa kunye nolwandle olukufutshane. I-Alona beach yimizuzu eyi-10-15 ukusuka kwindawo. Ukuya kwisixeko saseTagbilaran apho ichweba likhona, kuya kuthatha kuphela i-10-15 imizuzu yokuqhuba kwaye ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwindawo yethu nayo i-15 imizuzu yokuqhuba. Sinonxibelelwano lwe-intanethi olungenasiphelo oluphezulu ukuya kuthi ga kwi-100mbps ukuze ukonwabele.
Sime kumbindi weSiqithi sasePanglao, eBohol, kwiiPhilippines. Ke, YIZA kwaye UNONWABELE iholide yakho apha kwiBhohol yethu Entle.
Thina ePiccadilly Green Villas, siyathemba ukuba ukhuselekile kwaye uphilile ngala maxesha. Njengoko silungiselela ukukhonza nokuhlalisa iindwendwe, silandela IZIKHOKELO EZITHILE NEENKONZO kwaye sifuna nazi ukuba senza indima yethu ukunceda iindwendwe zakwa-Airbnb UKUHLALA NGOKUKHUSELEKILE NGOKUCOCUKA NOKUBULASA iintsholongwane kwindawo ehlala iphathwa, njengezitshixo zokukhanya, ikhabhathi. izibambo, amaqhosha engcango, ulawulo olukude, izibambo zetephu kunye nezinye phambi kokuba ungene.
Ukwahlukaniswa ngokweNtlalo kuyajongwa. Zonke iindwendwe kufuneka zibenemaski yazo yobuso. Ukuba unenkxalabo ethile, zive ukhululekile ukusithumelela umyalezo kwaye siya kukuvuyela ukukunceda ngakumbi.
IPiccadilly Green Villas ibekwe kufutshane neBingag, kwiSikolo samabanga aphantsi, iHinagdanan Cave edumileyo kunye neMithi Resort & Spa kunye nolwandle lwaseSan Pedro olukufutshane.
Ngamanye amaxesha, andizukufumaneka ngokobuqu kodwa unyana wam, uAJ, usemnyango kwaye uyakuvuyela ukukunceda kwiminqweno yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dauis